Palm Jebel Ali — ihu igwe site na ọnwa, mmiri okpomọkụ
World Resorts N'ókèala United Arab Emirates Palm Jebel Ali
The nkezi kacha kwa ụbọchị okpomọkụ — 41.2°C July. Nkezi kacha n'abalị okpomọkụ — 33.1°C July. The nkezi kacha nta kwa ụbọchị okpomọkụ — 23.9°C na January. The nkezi kacha nta n'abalị okpomọkụ — 19.6°C na January.
Nkezi kacha okpomọkụ nke mmiri — 33.8°C ofu August. The nkezi kacha nta okpomọkụ nke mmiri — 21.2°C ofu February.
Oke ọdịda — 11.1 mm E dere ya March. Kacha nta ọdịda — 0.1 mm E dere ya June.